Umuntu onezingubo uNkulunkulu For engcebweni yakhe — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Umuntu onezingubo uNkulunkulu ngoba ingcebo yakhe ine zonke izinto One. ingcebo abaningi abavamile angase wamphika, noma uma uvunyelwe ukuba, ukuthabela azishiye uyoboniswa ukuze omnene ukuthi abasoze ezidingekayo ukuze injabulo yakhe. Noma uma kumelwe ukuba babakhulula, eyodwa ngemuva elilodwa, uyokwenza nendlela nomuzwa wokulahlekelwa, ngokuba uMthombo wazo zonke izinto anakho One nke ukwaneliseka, bonke ubumnandi, konke akuthandayo. Kungakhathaliseki angase alahlekelwe yena uye empeleni yilutho, ngoba anawo manje konke One, futhi has it luyingxenye, ngokufanele naphakade.
A.W. Tozer, Ukuphishekela kaNkulunkulu
kelleyR • August 19, 2013 at 9:04 am • Phendula